Safka Metrobus ee Yenibosna! | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulSafka metrobus ee ku yaal New York!
03 / 10 / 2017 34 Istanbul, tareenka, GUUD, Nidaamyada Tire Wheels, Metrobus, TURKEY
Saldhigga metrobus ee ku yaala magaalada Yenibosna, safka ay sameeyeen muwaadiniinta sugaya in ay ku soo galaan metrobus ayaa sababay sameynta safaf kale oo ku yaal dhinaca sare.
Ma aha oo keliya subaxda iyo fiidkii, laakiin ku dhowaad mar kasta oo maalinta ka mid ah metrusyada waa la buuxiyaa. Cufnaanta laynka Metrobus waxaa badanaa la kulmay joogsiyada waaweyn iyo saldhigyada bedelka. Muwaadiniintu si ba'an ayay u xanuunsadaan. Haddii aad fadhidid waxaad dooneysaa waqti go'an iyo dulqaad.
Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad geliso amarka ay sameeyeen muwaadiniinta naftooda. Gawaarida Metrobus waxay u dhigantaa kuwa sugaya inay sugaan safkan waa kursiga. Laakiin waa inaad khatar u gelisaa safka dheer. Muwaadiniintu waa inay sugaan daqiiqado si ay u fuusho metrobus, cufnaanta metrobus sababtoo ah cufnaanta muwaadiniinta ka soo baxa saldhigga way adag tahay.
Tani waxay si gaar ah ugu dhacdaa saldhigyada waaweyn iyo xarumaha kala-soocida maalin kasta. Si kastaba ha ahaatee, sawirada isku-xirka ee lagu qaaday jadwalka New York ayaa muujiyay in xitaa safafka loo abuuray in ay fadhiistaan. Waxaa jiray dad aad u tiro badan oo joogsaday baska oo ahaa safka labaad ee safka sare ee galbeedka si uu u galo lineka metrobus.
Muwaadiniinta isku dayaya in ay sii wadaan shaqadooda, tallaabo tallaabo tallaabo ah si ay u gaaraan metrobus waxay sugi lahaayeen inay dhaafaan daqiiqado. Muwaadiniinta hoos ugu soo dhacaya cufnaanta metrobus ayaa sidoo kale ku adkaatay inay ka baxaan xarunta.
Banaanbax ka dhan ah mitibay oo ku yaala Istanbul
Joojinta metrobus ee Yenibosna